DIB USOO CELINTA SHARAFTA SOOMAALIYA – Nabad & Nolol
Soomaaliya – Balan-qaadyadii Madaxwene Farmaajo waxaa ka mid ahaa inuu soo celinayo sharafta iyo karaamadii ay soomaaliya ku lahayd aduunka. sanad iyo barka uu xilka hayay waxaa la dhehi karaa xooga ayuu saaray Madaxweynahu inuu ka dhabeeyo balanqaadkiisa waana sababta guulaha weyn looga gaaray siyaasadda arrimaha dibadda.
6-dii bishuu Juun, dowlada soomaaliya ayaa soo jiidatay dhamaan dareenka bulshada caalamka kadib markii go’aan taariikhi ay ay ka qaateen khilaafkii u dhaceeyay wadamada khaliijka, soomaaliya lama safan labada dhinac ee is hayay oo ay kala hogaaminayeen Sucuudiga iyo Imaaratka oo dhinac ah iyo Qatar oo dhinaca kale ah.
Go’aanka ay qaadatay dowlada soomaaliiya waxaa si weyn u soo dhoweeyay dhamaan shacabka soomaaliyeed kuwaas oo u arkay inuu yahay mid ku haboon qaranimada soomaaliya.
Go’aanka kadib, Madaxweynaha soomaaliya waxaa soo gaaray casumaado kala duwan oo uga imaanaya walaalihiii khilaafku u dhaxeeyay, Madaxweyne Farmaajo ayaa ku hormaray Dalka Sucuudiga kadib markii uu casumaad ka helay boqorka dalkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa Sucuudiga loogu soo dhoweeyay si taariikhi ah oo maamuus iyo sharaf mudan, kulamo kala duwan ayuu la qaatay madaxda dalka, waxaa la isku afgartay oo lagu heshiiyay mashaariic kala duwan oo labada dhinac dhexmara.
Booqashada Sucuudiga kadib, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa casumaad ka helay dalka Qatar.
Madaxweyne Farmaajo, waxaa loogu soo dhoweeyay dalka Qatar si heer sarre ah oo taariikhi ah, booqahshada Madaxweynaha ee Qatar iyo kulamada uu la qaatay ayaa keenay in halkaasi lagu saxiixo mashaariic kala duwan oo dowlada Qatar ka fulinayso gobola dalkeena.
Guusha kale ee laga gaaray siyaasadda arrimaha dibadda waa in dowlada soomaaliya xabsiyadda aduunka ka soo siideysay boqolaal maxaabiis ah halka kuwo kale weli hawshoodu socoto.
Wadamada laga soo celiyay Maxaabiista waxaa ka mid ah Itoobiya, Hindiya, Liibiya iyo Sheychles.